Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana an'i Will Rogers | Robin Williams Robin Williams Reincarnation Sarimihetsika famonoan-tena sy vatana vaovao - Fikarohana ao amin'ny vatana vaovao
Trangam-panjakan'olo-tokana an'i Will Rogers | Robin Williams Robin Williams Reincarnation Sarimihetsika famonoan-tena sy vatana vaovao
Notohanana tamin'ny: Fitarihana avy amin'ny Fanahy Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
Robin Williams ho teraka tamin'ny fampisavorovoroana an'i Will Rogers
Robin Williams namono tena nandritra ny takarivan'ny Alahady, ny volana Aogositra 10 na ny marainan'ny Alatsinainy Aogositra 11, 20 14. Andro vitsivitsy taty aorian'ity tranga mampalahelo ity, mpanohana ny Reincarnation Research dia nandefa hafatra ho an'ny fanehoan-kevitra fa nandritra ny androm-piainany teo aloha dia i Robin Williams no mpilalao horonantsary malaza Amerikana sy sarimihetsika, Will Rogers. Will Rogers dia iray amin'ireo nalaza malaza indrindra tamin'ny 1920 sy 1930.
Rehefa jerena ny sarin'ireo Rogers, dia tena nampiaiky ahy ny fitoviana teo amin'ny roa tonta. Raha ny marina, afaka mahita an'i Robin Williams amin'ny masony sy ny tsiky an'i Will Rogers. Ao amin'ny famakiana ny sasantsasany amin'ireo teny malaza indrindra nataon'i Will Rogers, dia afaka maheno an'i Robin Williams ihany koa ny filazana ireo zavatra ireo. Apetraho eo amin'ny sary ny cursor anao ary ampiasao ny bokotra arrow mba hivezivezy eo amin'ilay sary.
Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson izay nitranga tamin'ny 16 Aogositra 2014, Ahtun Re, ilay mpitarika fanahy nampitaina tamin'ny alàlan'i Kevin izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny marim-pototra avo lenta, dia nanamafy fa i Robin Williams dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Will Rogers.
Ny fahalianan'i Robin Williams amin'ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao & Inona no mety hitranga?
Fantatro fa i Robin Williams dia tena liana tamin'ny vatana vaovao indray. Ny fomba nahatongavan'io fahalalana io dia ny nahitako olona iray tamin'ny volana 2013 izay namorona iray amin'ireo mpamatsy E-mail amin'ny Internet, toa an'i Hotmail na Yahoo. Nividy orinasan-danjam-bola ny orinasa avy eo, izay namela ny mpandraharaha hiasa teknolojia hisotro ronono raha mbola kely.
Manantena aho fa mety liana amin'ny fanohanana ara-bola ny ReincarnationResearch.com ity olona ity ary nasehoko azy ny tranokalanay. Nohazavaiko fa ny fikarohana momba ny fanambadiana teraka indray ao amin'ny vatana vaovao, anisan'izany ireo tranga izay nohalalinin'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virgina, dia mampiseho fa Ny olona dia afaka manova ny finoana, ny zom-pirenena ary ny fiaviana ara-poko avy amin'ny fampodiana amin'ny iray hafa. Nanamarika aho fa ny fahatakarana io fomba fijery io dia afaka manampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa, satria mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy ny ankamaroan'ny fifandonana.
Nasehoko avy eo ity mpandraharaha hiasa teknolojia ity Porofon'ny lahatsoratry ny zaridaina indray, izay natsangako tao amin'ny You Tube tamin'ny May 21, 2013. Ity lahatsary ity dia miorina amin'ny ny fikarohana momba ny vatana vaovao indray ao amin'ny University of Virginia. Nandritra ny 40 taona, Dr. Stevenson dia nandalina ankizy kely izay nahatadidy fahatsiarovana tampoka tamin'ny androm-piainany taloha. Amin'ny tranga Stevenson 1200 eo ho eo, ny fahatsiarovana ny fiainana taloha an'ny ankizy dia azo hamarinina amin'ny fomba feno. Raha ny hevitro, ireo tranga ireo, amin'ny fitambarany, dia manome porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray
Rehefa avy nijery ny Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao Lahatsary, izay manana fomba fijery an-tapitrisany, dia nanjary nientanentana ny mpandraharaha hiasa teknolojia ary nanambara fa ny olona iray liana manaraka dia tena liana amin'ny fikarohana momba ny fiterahana indray ary niresaka momba an'i Ian Stevenson.
Nanazava ilay mpandraharaha hiasa teknolojia fa miaina ao amin'ny Sea Cliff monina ao San Francisco ary indray mandeha isam-bolana dia miara-mivory izy sy ity mpifanolo-bodirindrina ity, mifoka sigara ary miresaka momba ny fiainana. Ilay mpandraharaha hiasa teknolojia dia nilaza fa hilaza amin'ny namany ilay asa ataoko amin'ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao aho ary nilaza izy fa azony antoka fa hifandray amiko ny mpifanila trano amiko noho ny fiarahanay mianatra momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao. Nanontaniako ilay mpandraharaha hiasa teknolojia hoe iza ilay mpifanila aminy ary namaly izy hoe, "Robin Williams." Tena niaina tao amin'ny Cliff Sea i Robin Williams tamin'io fotoana io tamin'ny 2013, saingy nifindra tany Tiburon izy ary namono tena tamin'ny volana 2014 .
Rehefa nisaraka izahay, dia nilaza io olona io fa azony antoka fa hifandray amiko i Robin Williams. Nomeko ny mpandraharaha teknolojia hiasa aho ateraka indray ary Fiandohan'ny fanahy boky ho an'i Robin, miaraka amin'ireo fampahalalana mifandray amiko. Be ny fahadisoam-panantenako, i Robin Williams dia tsy nifandray tamiko mihitsy.
Raha liana, i Robin Williams dia nibilaogy tamin'ny sarimihetsika, Inona no mety hitranga?, izay miresaka momba ny famonoan-tena sy ny vatana vaovao. Manana vazivazy momba ny vatana vaovao indray i Robin izay nahazo tombony betsaka. Hoy izy momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao: "Amin'ny vintako no hiverenako toy ny tenako." Ity dia fanambarana mahatsikaiky, albiet marina.
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny famonoan-tena
Raha tena misy ny firaisana amin'ny vatana vaovao, inona no fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao, inona ireo fisainan'ny famonoan-tena amin'ny fivoaran'ny fanahy? Ian Stevenson dia namoaka tranga vao teraka indray momba ny famonoan-tena, izay heveriny fa iray amin'ireo tranga tena izy nianatra hatramin'izay. Ankoatra izany, tranga roa hafa momba ny fanambadiana vaovao momba ny famonoan-tena no navoakan'ny mpiara-miasa amin'i Stevenson, Satwant Pasricha, PhD. Azafady avereno jerena ny raharaha Ian Stevenson mifandraika amin'i Ruprecht Schultz amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy eto ambany
Trangam-panjakan'izao tontolo izao any Helmut Kohler | Ruprecht Schultz sy ny Karma ho an'ny famonoan-tena - mila mamaky
Mba hamerenana ny tranga hafa momba ny zaza ao amin'ny vatana vaovao momba ny famonoan-tena dia mandehana:
Nandinika ny Firaisana ara-nofo tamin'ny maty izy ireo tamin'ny famonoan-tena
Mbola mitohy hatramin'izao ny aretina ara-tsaina?
Na dia tamin'ny farany aza, i Robin Williams dia nanamboatra aretina amin'ny neurologique izay toa tsy natao ho an'ny fiainana dia tsy azo leferina, nijaly koa izy biochemika Mety ho nanan-javatra koa izy bipolar disorder, fantatra ihany koa amin'ny aretina manelingelina. Ireo toe-javatra roa ireo dia vokatry ny tsy fitovian'ny neurotransmitters ao amin'ny atidoha. Will Rogers, etsy ankilany, dia toa tsy nisy ny fahaketrahana ny fahaketrahana na ny korontana bipolar. Noho izany, raha raisina io tranga io, dia toa tsy fahatsapan'ny fanahy ny aretina ara-tsaina ary tsy mitohy mandritra ny androm-piainany. Hita kosa fa misy ifandraisany amin'ny lovam-pianakaviana iray.
Fitsikerana momba ny famonoan-tena ataon'i Robin Williams & Kurt Cobain
Nitatitra ny haino aman-jery fa ireo fianakaviana ao amin'ny Robin Williams, anisan'izany ny zanany, dia nahazo hafatra manohitra ny famonoan-tena nataon'i Robin. Ny fanoherana dia vokatry ny fomba fijerin'i Robin ny zavatra rehetra mety ho tadiavina, toy ny fianakaviana be fitiavana, laza sy harena maneran-tany. Amin'ny harena maro be, ahoana no hamonoana azy? Nisy fihetseham-po toy izany koa nitranga tamin'ny fahafatesan'ny namono tena Kurt Cobain, ilay mpihira taloha nitarika ny vondrona rock Nirvana.
Ity fankahalàna sy tsy fahampian'ny fangatahana famonoan-tena ity dia avy amin'ny tsy fahafahan'ny olona tsy manana fahaketrahana mba hisaintsaina hoe ahoana no mety hahatsapa tena ho ratsy amin'ny famonoan-tena. Tena tsotra izao, raha misy olona manana fahaketrahana ara-pahasalamana mafy, dia mety tsy hisy fifaliana eo amin'ny fiainana izany olona izany, ary koa fahadisoam-panantenana lalina. Ny olona iray izay efa niaina fahaketrahana mafy dia afaka mahatakatra tanteraka izany.
Ny teny ara-psikolojika ho an'ny fahatsapana iray niainan'ny fahaketrahana dia ny "anhedonia, "Izay tsy mahatsapa fifaliana na fahafinaretana eo amin'ny fiainana ny olona iray. Tsara homarihina fa amin'ny ankamaroan'ny trangam-pandrenesana, ny anhidonia dia azo ampiharina amim-pahombiazana medication anti-depressant. Ho an'ireo olona tsy mamaly fanafody, ECT (Electroconvulsant Therapy), fantatra amin'ny hoe fitsaboana electroshock, dia mety hahasoa azy.
Indrisy anefa, raha toa ka tsy ampiasaina ny fitsaboana sahaza na ny fitsaboana tsy mahomby amin'ny fanaraha-maso ny anhidonia dia mamono tena ny olona satria tsy afaka mandefitra intsony izy ireo hahatsapa ny fomba ataony. Mahatsapa ho famonoan-tena izy ireo ho toy ny fomba hanamaivanana ny fahaketrahana sy ny fahadisoam-panantenana.
Ireo olona izay miaina ny fahaketrahana dia tokony hisokatra mba haka fanafody izay hanova ny neurochemistry ao amin'ny atidoha mba hanamaivanana an'i anhidonia. Raha tokony hitsikera ireo izay mamono tena isika, dia tokony hiombom-pihetseham-po amin'ny olona izay mahatsapa tena ratsy ka mahatsapa fa tsy afaka manohy miaina izy ireo.
Voamarina ve ny famonoan-tena raha jerena ny porofo momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao?
Na dia mamporisika ny fahaiza-miombom-pihetseham-po sy ny fahatakarana amin'ireo izay mamono tena aza aho dia tsy mino hoe famonoan-tena izany famonoan-tena izany ary misy fiantraikany amin'ny karmika ny famonoan-tena. Indray mandeha indray, mba hamerenana ireo olana ireo dia mandehana any:
Raha fintinina, mifototra amin'ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, dia tsy hohelohina mandrakizay na ho any amin'ny helo i Robin Williams. Fa kosa, hateraka indray ao amin'ny vatana izy ary ho lasa manan-talenta amin'ny tantara an-tsary tahaka ny tamin'ny fahavelony toa an'i Will Rogers sy Robin Williams. Azo inoana fa tsy maintsy hiatrika karma mifandraika amin'ny famonoan-tena izy, anisan'izany ny alahelo nateraky ny olon-tiany, fa hitohy ny fandrosoan'ny fanahin'i Robin. Antenaina fa tsy ho teraka miaraka amin'ny fijaliana biokimika toy izany izy amin'ny ho avy. Tokony hotadidintsika fa nanana fo lehibe i Robin ary nanao zavatra tsara ho an'ny olona sahirana, noho izany dia manana karma tsara izy, izay hanampy amin'ny fandanjana ny karma ratsy ateraky ny famonoan-tena.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana mitovy eo amin'i Will Rogers sy Robin Williams.
Ny fiainana taloha talenta: Raha ny marina dia namerina namoaka ny asa nataon'i Will Rogers ho toy ny mpanao hatsikana, mpilalao sarimihetsika ary olo-malaza nalaza i Robin Williams.
Reincarnation & famonoan-tena: Ny fikarohana fanao amin'ny vatana dia mampiseho fa ireo izay mamono tena amin'ny famolavolana tahaka ny olon-drehetra. Ny olona izay manao famonoan-tena dia mety mila miatrika toe-javatra mitovy amin'ny an'ireo izay namono ilay olona hamono tena tamin'ny fiainany taloha, saingy antenaina fa tsy hamerina hamono tena indray ny olona amin'ny ho avy.